Women's Health( Part 1) - My Doctor " );( document.contains ) || document.write( "" );( window.DOMRect ) || document.write( "" );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( "" );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( "" );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( "" );( "objectFit" in document.documentElement.style ) || document.write( "" );
ပြိုမတေို့မမေးရဲတဲ့ ပြိုမတေို့အကွောငျး (အပိုငျး (၁) )
ပြိုမတေို့မိနျးကလေးတှသေိခငျြတဲ့ အမြိုးသမီးရောဂါပွသနာတှအေမြားကွီးရှိနပေမေယျ့….မေးမွနျးဖို့ရာ မိနျးကလေးပီပီအရှကျပိုတာကတဈကွောငျး၊ အခြို့အကွောငျးအရာတှကေ ဖှငျ့ဟမေးမွနျးလိုကျရငျ ပြိုမတေို့ကိုတဈမြိုးတမညျ အထငျအမွငျလှဲမှားမှာ စိုးတာကတဈကွောငျးမို့ မမေးဖွဈလိုကျတဲ့ မေးခှနျးမြားစှာရှိပါတယျ။
ဒါကွောငျ့ တကူးတက မေးစရာမလိုဘဲ ဗဟုသုတအနနေဲ့သိထားရအောငျ ပြိုမတေို့ သိခငျြလောကျမယျ့အကွောငျးအရာလေးတှကေို
ဒီတဈပတျမှာတော့ မိနျးမကိုယျတဈဝိုကျက အဆီဖုလေးတှအေကွောငျး ပွောပွပေးသှားမှာဖွဈပါတယျ။တဈခါတရံ ရခြေိုးဆပျပွာတိုကျရငျးဖွဈစေ၊ အိမျသှာသှားပွီး သနျ့စငျဆေးကွောရငျးဖွဈစေ မိနျးမကိုယျတဈဝိုကျမှာ အဖုသေးသေးလေးတဈခု (သို့) သုံးလေးငါးခုလောကျ စမျးမိတာမြိုးရှိတတျပါတယျ။နာလားဆိုတော့ မနာ…ယားလားဆိုတော့လညျး မယား..ဒီအတိုငျးအဖုလေးတှရှေိနတေတျပါတယျ။
ဒီလိုဆို ပြိုမတေို့တှေ စိတျပူမိကွပါပွီ…ဘာအဖုလဲ? ကငျဆာအကြိတျလား…ဘာလား?ပေါ့။
တကယျကတော့ စိတျပူဖို့ သိပျမလိုလှတဲ့ အဆီဖုလေးတှပေါ…
အဆီဂလနျးရှိတဲ့ ခန်ဓာကိုယျမညျသညျ့နရောမှာမဆို ဖွဈတတျပါတယျ။ တဈခါတဈခါ ဆီးခုံနဲ့မိနျးမကိုယျတဈဝိုကျက အမှေးအမြှငျတှရေိတျကွတဲ့အခါ အခြို့ပွတျကနျြခဲ့တဲ့အမှေးငုတျတိုလေးတှဟော အပွငျကို ဆကျလကျမရှညျလာနိုငျဘဲ အရပွေားထဲပွနျလညျတိုးဝငျပွီး အမှေးအိတျယောငျတာမြိုးလေးတှလေညျး ဖွဈနိုငျပါတယျ။
သတိထားရမှာတဈခုက ဒီလိုအဖုလေးတှကေို သှားမညှဈမိစဖေို့ပါပဲ။ တဈကိုယျရညျသနျ့ရှငျးရေးပုံမှနျဂရုစိုကျမယျ …ဆိုလိုတာက….အိမျသာသှားအပွီး ပုံမှနျသနျ့စငျဆေးကွောမယျ၊အတှငျးခံဝတျတဲ့အခါ သခြောလြှျောဖှတျနလှေနျး မီးပူတိုကျပွီးမှဝတျမယျ၊ အိမျသာသှားအပွီး မိနျးမကိုယျကို စိုထိုငျးထိုငျးဖွဈကနျြမနစေဖေို့ တဈသြှူးသနျသနျ့နဲ့ခွောကျသှအေ့ောငျလုပျမယျ…ဒီလိုဆိုရငျ အခြိနျတနျရငျ ဒီအဖုလေးတှဟော ပြိုမတေို့ကို ဒုက်ခမပေးဘဲ သူ့အလိုလိုပြောကျသှားပါလိမျ့မယျ။ဒီလိုမှမဟုတျဘဲ…အဖုလေးတှကေို လကျနဲ့ဖွဈမယျ ညှဈမယျဆိုရငျတော့ လကျသညျးကတဈဆငျ့ အဖုလေး
တှပေိုးဝငျပွီး ယောငျယမျးခွငျး၊ပွညျတညျခွငျး၊ နာကငျြကိုကျခွဲခငျးမြားဖွဈလာနိုငျပါတယျ။ဒီလိုအခွအေနဖွေဈလာပွီဆိုရငျတော့ တဈယောကျတညျးကွိတျကုမနဘေဲ ဆေးခနျးပွဖို့တိုကျတှနျးပါရစေ။
အမြိုးသားဆရာဝနျနဲ့ပွရမှာ ပြိုမတေို့ရှကျတယျဆိုရငျ အမြိုးသမီးဆရာဝနျနဲ့ရှေးခယျြပွသပါ။ကဲ…ဒီလောကျဆိုရငျ စုံသလောကျရှိပွီမို့ နောကျတဈပတျမှာတော့
ပြိုမတေို့မမေးရဲတဲ့ ပြိုမတေို့သိထားသငျ့တဲ့ အခွားအကွောငျးအရာမြားကို ဆကျလကျဖျောပွပေးသှားမှာပဲ ဖွဈပါတယျ။
ပျိုမေတို့မမေးရဲတဲ့ ပျိုမေတို့အကြောင်း (အပိုင်း (၁) )
ပျိုမေတို့မိန်းကလေးတွေသိချင်တဲ့ အမျိုးသမီးရောဂါပြသနာတွေအများကြီးရှိနေပေမယ့်....မေးမြန်းဖို့ရာ မိန်းကလေးပီပီအရှက်ပိုတာကတစ်ကြောင်း၊ အချို့အကြောင်းအရာတွေက ဖွင့်ဟမေးမြန်းလိုက်ရင် ပျိုမေတို့ကိုတစ်မျိုးတမည် အထင်အမြင်လွဲမှားမှာ စိုးတာကတစ်ကြောင်းမို့ မမေးဖြစ်လိုက်တဲ့ မေးခွန်းများစွာရှိပါတယ်။
ဒါကြောင့် တကူးတက မေးစရာမလိုဘဲ ဗဟုသုတအနေနဲ့သိထားရအောင် ပျိုမေတို့ သိချင်လောက်မယ့်အကြောင်းအရာလေးတွေကို
ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ မိန်းမကိုယ်တစ်ဝိုက်က အဆီဖုလေးတွေအကြောင်း ပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။တစ်ခါတရံ ရေချိုးဆပ်ပြာတိုက်ရင်းဖြစ်စေ၊ အိမ်သွာသွားပြီး သန့်စင်ဆေးကြောရင်းဖြစ်စေ မိန်းမကိုယ်တစ်ဝိုက်မှာ အဖုသေးသေးလေးတစ်ခု (သို့) သုံးလေးငါးခုလောက် စမ်းမိတာမျိုးရှိတတ်ပါတယ်။နာလားဆိုတော့ မနာ...ယားလားဆိုတော့လည်း မယား..ဒီအတိုင်းအဖုလေးတွေရှိနေတတ်ပါတယ်။
ဒီလိုဆို ပျိုမေတို့တွေ စိတ်ပူမိကြပါပြီ...ဘာအဖုလဲ? ကင်ဆာအကျိတ်လား...ဘာလား?ပေါ့။
တကယ်ကတော့ စိတ်ပူဖို့ သိပ်မလိုလှတဲ့ အဆီဖုလေးတွေပါ...
အဆီဂလန်းရှိတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်မည်သည့်နေရာမှာမဆို ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ တစ်ခါတစ်ခါ ဆီးခုံနဲ့မိန်းမကိုယ်တစ်ဝိုက်က အမွှေးအမျှင်တွေရိတ်ကြတဲ့အခါ အချို့ပြတ်ကျန်ခဲ့တဲ့အမွှေးငုတ်တိုလေးတွေဟာ အပြင်ကို ဆက်လက်မရှည်လာနိုင်ဘဲ အရေပြားထဲပြန်လည်တိုးဝင်ပြီး အမွှေးအိတ်ယောင်တာမျိုးလေးတွေလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
သတိထားရမှာတစ်ခုက ဒီလိုအဖုလေးတွေကို သွားမညှစ်မိစေဖို့ပါပဲ။ တစ်ကိုယ်ရည်သန့်ရှင်းရေးပုံမှန်ဂရုစိုက်မယ် ...ဆိုလိုတာက....အိမ်သာသွားအပြီး ပုံမှန်သန့်စင်ဆေးကြောမယ်၊အတွင်းခံဝတ်တဲ့အခါ သေချာလျှော်ဖွတ်နေလှန်း မီးပူတိုက်ပြီးမှဝတ်မယ်၊ အိမ်သာသွားအပြီး မိန်းမကိုယ်ကို စိုထိုင်းထိုင်းဖြစ်ကျန်မနေစေဖို့ တစ်သျှူးသန်သန့်နဲ့ခြောက်သွေ့အောင်လုပ်မယ်...ဒီလိုဆိုရင် အချိန်တန်ရင် ဒီအဖုလေးတွေဟာ ပျိုမေတို့ကို ဒုက္ခမပေးဘဲ သူ့အလိုလိုပျောက်သွားပါလိမ့်မယ်။ဒီလိုမှမဟုတ်ဘဲ...အဖုလေးတွေကို လက်နဲ့ဖြစ်မယ် ညှစ်မယ်ဆိုရင်တော့ လက်သည်းကတစ်ဆင့် အဖုလေး
တွေပိုးဝင်ပြီး ယောင်ယမ်းခြင်း၊ပြည်တည်ခြင်း၊ နာကျင်ကိုက်ခြဲခင်းများဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေဖြစ်လာပြီဆိုရင်တော့ တစ်ယောက်တည်းကြိတ်ကုမနေဘဲ ဆေးခန်းပြဖို့တိုက်တွန်းပါရစေ။
အမျိုးသားဆရာဝန်နဲ့ပြရမှာ ပျိုမေတို့ရှက်တယ်ဆိုရင် အမျိုးသမီးဆရာဝန်နဲ့ရွေးချယ်ပြသပါ။ကဲ...ဒီလောက်ဆိုရင် စုံသလောက်ရှိပြီမို့ နောက်တစ်ပတ်မှာတော့
ပျိုမေတို့မမေးရဲတဲ့ ပျိုမေတို့သိထားသင့်တဲ့ အခြားအကြောင်းအရာများကို ဆက်လက်ဖော်ပြပေးသွားမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။